Mogadishu Journal » 2019 » August » 21
Mjournal :-Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta shir ka yeeshay xaaladda Soomaaliya, waxaana mas’uuliyiinta ka hadashay ka mid ahaa Ergayga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan. Swan waxa uu mar kale ku celiyey in loo baahan in hannaan keliya oo...
Khayre oo Xafiiskiisa Ku qaabilay Wasiiru Dowlaha Ingiriiska Ee Arrimaha Afrika
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiiru dowlaha arrimaha dowladda Ingiriiska u qaabishan arrimaha Afrika, Andrew Stephenson. Ra’iisul wasaare Khayre iyo Andrew Stephenson ayaa ka wada hadlay...
Mjournal :-Dawladda Kenya ayaa ku guulaysatay codbixintii Guddiga Joogtada ah ee Ururka Midowga Afrika ee loogu tartamayey cidda qabanaysa kursiga Afrika ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay sannadaha 2021-ka illaa 2022-ka. Kenya ayaa cod-bixin ka dhacday magaalada Addis Ababa...
Mjournal :-Dowlada Kenya ku guulesatay kursiga aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka kadib markii cod loo qaaday. Kursigan oo ka mid ah 10-ka kursi ee kor joogtada ka ah Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa waxaa ku loolamayay dowladaha Kenya iyo Jabuuti. Wakiillada Guddiga...
Wasiirka Maaliyada oo ka hadlay caqabadaha hortaagan daabicida lacagta shillin Soomaaliga
Mjournal :-Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Bayle oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xarunta wasaaradda maaliyadda ayaa ka hadlay halka ay mareyso daabicidda lacagta cusub ee Soomaaliya iyo cafinta deymaha lagu leeyahay dalka Soomaaliya. Wasiirka ayaa...
Mjournal :-Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ku eedeeyay Ciidanka xoogga dalka ee ka tirsan qeybta 60aad ee fadhigooda yahay magaalada Baydhabo inay yihiin kuwo ugu liito. Waxaa uu sheegay in askarta iyo saraakiisha ka tirsan qeybtaas...
Weeraryahanka Manchester United Alexis Sanchez ayaa lagu soo waramayaa inuu ku biirayo kooxda Inter Milan 48da saacadood ee soo socota. Xiddiga reer Chile ayaa u furan ka tagista Old Trafford isagoo dhaliyay kaliya shan gool tan iyo markii uu ka soo tagay Arsenal, United ayaa...
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa xalay casho sharaf waxaa uu u sameeyay Xildhibaanada Baarlamaanka labaad ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ee dhawaan lagu dhawaaqay. Kulanka oo ka dhacay mid ka mid ah Hoteelada Magalada Kismaayo ayaa...
Soomaaliland oo War kasoo saartay dagaal ka dhacay Gobolka Sanaag
Mjournal :-Galinkii danbe ee shalay ayaa waxaa deegaanka Hataaftimo oo hoostaga Magalada Badhan ee Gobolka Sanaag uu dagaal ku dhexmaray Ciidamo kala taabacsan Puntland & Soomaaliland,waxaana dagaalkaas ka hadlay Soomaaliland. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliland...